सुख्खा खोकी हटाउने घरेलु उपचार थाहा पाउनुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
जाडो सुरु हुने बित्तिकै धेरै मानिसहरू चिसो र रुगाखोकिबाट ग्रस्त हुन थाल्छन् । यद्यपि यो एक धेरै साधारण रोग हो, यदि यो बढ्यो भने, यसले बढ्नको लागि केहि समय लिदैन।
चिसोमा हल्दीको दूध धेरै फाइदाजनक छ किनकि हल्दीमा एन्टीआक्सीडन्ट हुन्छ जसले हामीलाई जीवाणुहरूबाट जोगाउँछ । राती सुत्नु अघि यो पिउँदा द्रुत राहत हुन्छ । हल्दीमा एन्टि–ब्याक्टेरिया र एन्टी–भाइरल गुणहरू हुन्छन्, जसले संक्रमण लड्छ । यसको विरोधी भडकाउने गुणहरूले चिसो, खोकी र चिसो लक्षणहरूमा राहत प्रदान गर्दछ ।
तातो पानीमा एक चुटकी नुन थप्दै, गर्ग्लिलंगले खोकी र चिसोमा ठूलो राहत प्रदान गर्दछ । यसले घाँटीलाई आराम दिन्छ र खोकीबाट पनि राहत प्रदान गर्दछ । यो पनि धेरै पुरानो रेसिपी हो ।
यदि तपाईंको टाउको चिसोका कारण भारी भइरहेको छ भने, पार्सली तताएर प्याकेट बनाउनुहोस् । जब यो एक कप रहन्छ, यसमा गुड़ थप्नुहोस् । केही समय पकाए पछि, यो मिश्रण पिउनुहोस् । फाइदा हुन्छ । तुलसी, काली मिर्च संग काढ़े तयार पार्नुहोस् । यसलाई तातो बनाएर पिउँदा घाँटी दुखाइ कम हुन्छ र संक्रमण पनि समाप्त हुन्छ । दालचीनी र जायफल बराबर मात्रामा पीसेर बिहान र बेलुका महको साथ चाटेपछि पनि जाडो र चिसोमा फाइदा हुन्छ ।
चिसोमा आफ्नो स्वास्थ्यलाइ ख्याल गर्नुहोस् है, नभए हुनसक्छ गम्भीर समस्या
जबकी हामीले नियमित रुपमा अपनाउने यस्ता सावधानी नै कयौ पटक स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याको कारक बन्ने गर्छ । जाडोमा चिसोबाट बच्नका लागि हामी प्राय, हात गोडा ढाकेर राख्ने गर्दछौ । जबकी यस्ता गतिविधीले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या निम्त्याउने गर्छ । हातगोडा लगगायत शरीरका प्रत्येक अंगलाई रात दिन ढाकेर राख्दा शरीरमा अत्याधिक गर्मी पैदा हुन्छ । परिणामस्वरुप, वाकवाकी लाग्ने लगायतको विभिन्न समस्या निम्तिन सक्छ ।
मौसम चिसो भएका कारण यो समयमा मानिसहरुले खासै पानी पिउँदैनन् । पिए पनि कम न्युन मात्रामा पिउँछन् । जाडोमा प्यास कम लाग्ने भएकाले पनि मानिसहरुले यो समयमा कम पानी पिउँछन् । जबकी शरीरमा तरलता कायम राख्न तथा शरीरलाई सक्रिय राख्नका लागि पनि पानी पिउन जरुरी छ । त्यसबाहेक, पाचन प्रक्रियाका लागि पनि पानीको सेवन जरुरी छ ।
चिसो मौसममा स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न समस्या निम्तिने गर्छ । त्यसमध्य छाला सम्बन्धि समस्या पनि एक हो । चिसो मौसममा सुख्खा वायुका कारण धेरैलाई छाला सुख्खा हुने समस्या हुने गर्दछ । यस समस्याबाट बच्नका लागि धेरैले छालामा चिल्लो क्रिम तथा तेल लगाउने गर्दछन् । जबकी यस्ता क्रिम तथा तेलको प्रयोगले छालामा धुलोमाटो टासिनुका साथै किटाणुको संक्रमण पनि धेरै हुने गर्दछ । –हिजोआज विवाह, ब्रतवन्ध लगायतमा हुने विभिन्न पाटी तथा भोजहरुमा आइसक्रिम राखिने गरिन्छ ।
चिसोमा आइसक्रिम खाने धेरैको सोख हुन्छ । चिसोमा आइसक्रिमको सेवनले रुघाखोकी ठिक हुन्छ भन्ने धेरैको मान्यता छ । जबकी चिसोमा आइसक्रिम खानाले घाँटीको संक्रमण हुनसक्छ ।
बढ्दो चिसोका कारण छातीमा कफ जम्ने समस्या छ ? घरेलु उपचार बाटै ठिक हुन्छ
चिसो सुरु हुनासाथै रुघाखोकी लाग्नु र घाँटी खराब हुनु आम समस्या हो । यसबाहेक चिसो मौसममा धेरै हुने अर्को समस्या छातीमा कफ जम्ने हो । छातीमा कफ जम्नाले सास फेर्न मात्रै समस्या हुँदैन, यसले अरु धेरै समस्याहरु जन्माउँछ । यसबाट छुटकारा पाउनको लागि मानिसहरुले विभिन्न किसिमका औषधिको सेवन गर्छन् । तर, कुनै सफलता हात पर्दैन ।
एक चम्चा अर्गानिक मह र २ चम्चा कागतीको रस मिसाएर पिउनुहोस् । यसले तपाईंको घाँटीलाई आराम मिल्छ । महमा एन्टीब्याक्टेरियल र एन्टी फंगल गुण पाइन्छ । त्यस्तै कागतीमा भिटामिन सीको भरपुर मात्रा पाइन्छ जसले तपाईंको घाँटीलाई तुरुन्त आराम पुर्याउँछ ।
मरिच केही पिरो र स्वादमा तिख्खर हुन्छ । यो श्वासप्रश्वासको समस्या समाप्त गर्नको लागि आयुर्वेदमा चमत्कारी औषधि मानिन्छ । यसले कफलाई निमिट्यान्न गरिदिन्छ । मरिचमा पाइपरलांगमाइन नामक रसायनिक तत्व पाइन्छ र यसले हाम्रो शरीरमा एन्जाइम बन्नबाट रोक्छ । एन्जाइमले खोकी र यसको इन्फेक्सनलाई बढाउँछ जुन कफको कारण बन्छ । दैनिक एक कप पानीमा २० दाना जति मरिच उमाल्नुहोस् र फेरि त्यसमा मह मिसाएर पिउनुहोस् ।
अंगुर बिभिन्न रोगहरुको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसमा होरोस्टिलवेन नामक पदार्थ पाइन्छ जुन एन्टिअक्सिडेन्टले भरपुर हुन्छ । अंगुरमा हुने एक्सपेक्टोरेन्ट छाती र फोक्सोबाट कफ निकाल्नमा सहायक हुन्छ । छातीमा जम्मा भएको कफ निकाल्नको लागि अंगुरको जुसमा दुई चम्चा मह मिसाउनुहोस् र सँधै पिउनुहोस् । अंगुरको जुसमा नुन र मरिच मिसाएर पिउनाले छिटो फाइदा हुन्छ ।
कफ जमेको स्थितीमा हल्का तातो पानी पिउनुहोस् । यसले तपार्इंको छाती र घाँटीमा जमेको कफको मात्रालाई कम गर्छ । कागती पानी वा कागतीको चिया पिएर पनि तपाईं आफूलाई हाइड्रेट राख्न सक्नुहुन्छ ।
यस्ता मानिसहरुले जाडोमा अदुवा खानै हुदैन
अदुवा, वैज्ञानिक वर्गीकरणअनुसार जिन्जीविरेसी परिवारमा पर्ने प्रमखु बिरुवा हो । यसको प्रयोग साधारणत तरकारी, मसला र औषधिको रूपमा आउँछ । यसको गानो रेशादार हुन्छ । यसले शरीरलाई तातो बनाउनुको साथै रुघा–खोकी, ज्वरो, घाँटी खस्खसाउने जस्ता समस्याहरुबाट मुक्ति प्रदान गर्छ । तर, कहिलेकाहीँ अदुवाको सेवन कुनै व्यक्तिको लागि ज्यान नै जाने कारण पनि हुनसक्छ ।
अदुवाको सेवन हरेकको लागि फाइदाजनक हुँदैन । त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरु छन् । जसलाई अदुवाको सेवन शरीरका लागि खतरनाक प्रमाणित हुन सक्छ । आज हामी त्यस्ता रोगहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं, जसमा अदुवाको सेवनले नोक्सान पु¥याउन सक्छ ।
हरेक दिन औषधि लिने व्यक्तिहरुका लागि अदुवाको सेवन खतरनाक हुन सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिले दिनहुँ औषधि प्रयोग गर्छ भने उनीहरुले अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन । किनभने ती औषधिमा समावेश ड्रग्सहरु जस्तै बेटा–ब्लोकर्स, एन्टिकोगुलेन्ट र इन्सुलिन अदुवासँग मिलेपछि खतरनाक मिश्रण बन्छ ।
गर्भधारण भएको समयमा अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन । सुरुवाती महिनामा अदुवाको सेवन राम्रो भए पनि पछि यसको सेवनले नोक्सान पु¥याउन सक्छ । बच्चा जन्मनु तीन महिना अगाडि अदुवाको सेवन खतरनाक हुनसक्छ । यो समयमा अदुवाको सेवन गर्नाले प्रिम्याच्योर डेलिभरी र लेबर हुने खतरा हुन्छ ।
यदि तपार्इं कुनै अपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपार्इंले दुई हप्ताअघिदेखि नै अदुवाको सेवन गर्नुहुँदैन । किनभने अदुवाको सेवन गर्नाले रगत पातलो हुन्छ । जुन सामान्य स्थितिमा शरीरको लागि ठिक होइन । सर्जरीको समयमा अदुवाको सेवन गर्नाले तपाईंको शरीरबाट बढी मात्रामा रगत बग्न सक्छ ।
यदि तपाईं दुब्लो–पातलो हुनुहुन्छ भने अदुवाको सेवन तपार्इंका लागि हानिकारक हुन्छ । किनभने अदुवामा फाइबर हुन्छ र यसले शरीरको पीएच लेवललाई बढाउँछ । जसले गर्दा खाना पचाउने एन्जाइम्स एक्टिवेट हुन्छ । यसले चिल्लो पदार्थलाई तीब्र गतिमा उत्पन्न गराउँछ र भोक कम लाग्छ, जसका कारण वजन कम हुन थाल्छ ।